Pokemon GO inogadziridzwa kugadzirisa dambudziko reGoogle | IPhone nhau
Pokemon GO inovandudzwa uye inogadzirisa dambudziko reakaundi maGoogle
Panguva iyo yatinofanirwa kunge tichitsikisa chete runyerekupe rwe iPhone 7 uye kubuda, Nintendo yazvino hit yakakwenenzverwa kunze: Pokémon GO. Izvo zvakatanga sejoke reGoogle chave chinhu chaicho uye kubudirira kwemutambo mutsva wePokémon kwakonzera kuti zvikamu zvekambani yeJapan zvikwire 25%. Vazhinji vari kuve iyo nhau ine chekuita nePokémon GO, asi hazvisi zvese zvave zvakanaka, senge, kana isu tikamisa account yedu Gmail, mutambo waive kuwana ruzivo rwedu rweGoogle.
Sezvauri kuona, ndiri kutaura munguva yapfuura. Uye ndeyekuti iyo yekutanga yekuvandudza yePokémon GO yatogadzirisa kare dambudziko iro musimudziri akatuma kusimbisa kuti haifanirwe kunge yakambovapo uye kuti kwaive kutyora kwakakomba kwekuchengetedza. Kubva ino gadziriso, v1.0.1, zvinogona kunzi zvatova zvakachengeteka zvachose tamba Pokémon GO, chero bedzi vashandisi vakangwarira, usanyanyo kanganiswa uye usina chero tsaona nekuti ivo havasi kuteerera kune zvakapoteredza.
Chii chitsva muPokémon GO 1.0.1
Kutenda nemhinduro yako inoshamisa uye kutsigira Pokémon GO! Tiri kushanda nesimba kusimudzira ruzivo rwemunhu wese. Iyi yekuvandudza inotarisa mukugadzira Pokémon GO yakagadzikana pamwe nekuvandudzwa kunotevera:
Varairidzi havafanirwe kuisa yavo yekushandisa uye password kakawanda mushure mekubuda kunze.
Yakawedzera kugadzikana kune yekupinda maitiro kune iyo Pokémon Trainer Club account.
Nyaya dzakagadziriswa dzakakonzera kudzima.
Yakagadzirisa nyaya yeGoogle account
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vari kutarisira kutamba yazvino Nintendo yakarova uye hauna kuda kuita hunyengeri uhwo tinotsanangura Muvhuro wapfuura, iwe unofanirwa kuziva kuti mangwanani ano akatosvika kuGerman mune zvinoita sekutanga kwekutanga kwepasirese, saka mirira unogona kunge uchipera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokemon GO inovandudzwa uye inogadzirisa dambudziko reakaundi maGoogle
Maitiro ekuchengetedza bhatiri uchitamba Pokemon Go
Iwe unoziva kuputsa moyo we iMessage Dhijitari Kubata?